DADI CNC, oo xaruntiisu tahay Magaalada Jinan ee Gobolka Shandong, ee Shiinaha, ayaa hormuud u ahayd wershadaha ka shaqeynta alwaaxyada iyo hal-abuurka warshadaha laser muddo 15 sano ah waxayna sii wadaa inay la tartanto warshadaha horumarin cusub.
Xarunta DADI cnc, waxaan higsaneynaa inaan nahay "caalami ahaan maxalli" maadaama aan ku lug leenahay barnaamijyo badan oo wacyigelinta bulshada ah oo aan ku bixinno waqtigeenna, taageerada, wax soo saarka, iyo adeegyadeena.
DADI CNC waxaa dhidibada loo aasay 2006 Magaalada Jinan ee Gobolka Shandong oo aragtay fursad ay ku keeni karto alwaax tayo sare leh iyo mashiinada laser adduunka oo dhan. Mashiinka ugu horreeya ee la soo bandhigo waxay ahaayeen mashiinno isku dhafan oo goor dhow u horseedaya DADIc CNC mashiinka alaabada badan leh. Sanado badan ayaan dhisney dariiq balaaran mashiinada alwaaxyada iyo mashiinnada leysarka ka hor intaanan horay ugu dhaqaaqin hormarka noo gaar ah ee CNC Automation.
Waxaan ku bilownay qadkayaga 'CNC Machines' SmartShop oo durbadiiba waxaan ku raacnay makiinadaha Swift iyo IQ. Ka dib markii aan wax ka soo saarnay dhammaadka CNC Router, waxaan ku soo baxnay xitaa mashiinno horumarsan sida CO2 Lasers iyo Fiber Cutters. Hadda waxaan haynaa qalab balaaran oo mashiinno ah oo la heli karo si ka badan sidii hore, oo dhan si looga caawiyo macaamiisheena inay gaaraan ujeedooyinkooda si ay u horumariyaan habka ay u ganacsadaan.
Waa kuma DADI cnc ?
Waxaan nahay dadka aan shaqaaleyno, alaabada aan iibinno iyo xiisaha aan u qabno inaan u adeegno macaamiisheenna oo ka yimaada labadaba.
DADI CNC wuxuu ku dhashay magaalada Jinan, gobolka ShanDong ee Shiinaha, baahi aad u baadi goobaya ayaa ah in la helo mashiin wax lagu sawiro oo aamin ah, tayo leh oo sax ah dhammaan macaamiisha adduunka. Hadda, in kabadan toban sano ka dib, DADI CNC wali waa shirkad leh qiime isku mid ah tayada, saxnaanta iyo alaabada aaminka ah taas oo sidoo kale diiradda saareysa macaamiishooda iyo baahiyahooda.
Intii aan bilownay hogaamiye ahaan mashiinnada leysarka iyo warshadaha cnc router, waxaan hadda ku dabaqi jirnay fikradaheena hal-abuurka ah birta, balaastigga, calaamadaha iyo ganacsiyada isku-dhafan.
Waxaan wax walba ku qabnaa annaga oo maskaxda ku heynna - si aan uga caawino macaamiisheenna sidii ay u dhisi lahaayeen sheekooyinka guusha shaqsiyeed.
Waxaan iibinaa xalal.
Falsafada shirkadu waa in ay shaqaaleysiiso shaqaale leh dhaqan wanaagsan, marka ugu horeysa uguna muhiimsan. In kasta oo shirkadaha badankood ay diirada saaraan waaya-aragnimada, waxaan aaminsanahay in aan shaqaaleysiinno dadka leh dhaqan sax ah in aan abuuri karno dhaqan shirkadeed oo xamaasad u leh shirkaddayada, alaabadayada, iyo qancinta baahiyaha macaamiisheena.
Ahmiyada ugu weyn ee DADI CNC waa in la bixiyo xalalka baahida macaamiisheena. Haa, waxaan iibinaa mashiinno laakiin ugu dambeyntii waxaan iibinaa alaabooyin xalliya arrimo sahlan-adag. Haddii aad tahay shaqaalle isticmaalaya farshaxan aad u farsameyso shaqo farshaxan si aad ugu gudubto cunuggaaga ama maamule wax soo saar oo u baahan qaybo sax ah, tayo leh oo joogto ah, alaabadayadu waxay ku siinayaan aaladaha lagu dhammaystiro hawsha.
Waxaan Iibineynaa Xalka.